Uluhlu lweeNtengiso zePropathi: Amakhaya okuhlala Iingwamza Mantla Yorkshire Scarborough
I-1-10 yoluhlu lwe-74
Ibhedi ye-3 i-Detached Bungalow ithengiswa eScborborough, eMantla Yorkshire
Inkcaza emfutshane Efumaneka eLady Ediths Drive ukuphela kwendlela, Siyavuya ukukwazi ukuzisa ezivenkileni ziveliswe kakuhle kwaye zibanzi izindlu ezintathu ezinamagumbi kunye nolwakhiwo oluninzi olunokubangela umdla kubathengi abaninzi. Ukuhlala kakuhle kwisikolo sasekuhlaleni ...
Scarborough in North Yorkshire, Yo12 5re
Ibhedi ye-2 i-Detached Bungalow ithengiswa eScborborough, eMantla Yorkshire
I-bungalow enikezelwe ngokungakhethi kwigumbi lokuphumla elinokuthula nelinobuntu, le mpahla ilungele wonke umntu olungele ukungena kwaye abeke iinyawo zabo! Ngoku kutshanje ipropathi iphinde yenziwa ngokutsha iikhaphethi ezintsha xa zizonke. Ukuxhamla kwigumbi lokuphumla elikhulu, kunye negumbi lokutyela elahlukileyo ekhokelela ...
Scarborough in North Yorkshire, Yo12 5bz
+++ Usebenza ngocwangco lwe-Ce-de-sac ngaphakathi kwesiphelo se-osgodby ye-Eastfield, eli gumbi mabini alungiselelwe indawo yokuhlala lixabiso lentengiso ngokukhawuleza kunye nezibonelelo ezivela kwikhitshi langoku, ukupaka isitrato ngaphandle kwendlela kunye negadi enomgangatho ophantsi wolondolozo +++ Indawo yokuhlala ihlala ngokufutshane; iholo lokungena eline-storag eyakhelweyo ...
Scarborough in North Yorkshire, Yo11 3nb
Published by Cph Property Services
Igumbi lokulala le-2 Ibhedi eSemi-ethe yafunyanwa eSarborborough, eMantla Yorkshire
+++ Indawo entle esekupheleni kwe-osgodby yempuma yendawo ye-Bungalow eboniswe kakuhle enika amagumbi okulala amabini, indawo yokupaka ngaphandle kwesitalato kunye negadi esemva esemthethweni +++ Iholo lokungena elihlala i-boiler 'ye-Saber' kunye ne-fuseboard, igumbi lokuphumla eligcwele fak ...
I-2 Bed Bungalow iyathengiswa eScborborough, eMantla Yorkshire
Inkcazo ephambiliImithombo yeemvula iyonwabele ukuthengisa le gumbi lixabisekileyo ezimbini zegumbi lokuphumla elinomtsalane kumabala avulekileyo angasemva kumhlaba ongaphezulu weefama. Ifumaneka kwilali ethe cwaka ifuna ilali enomoya omnandi wabahlali kunye nezinto ezithile zendawo. Vula kuluhlu olubanzi lwabathengi le ...
Scarborough in North Yorkshire, Yo13 9ae
Published by Reeds Rains - Scarborough
Igumbi lokulala le-3 Ibhedi eSemi-ethe yafunyanwa eSarborborough, eMantla Yorkshire
Iimpawu * Igumbi lokulala ezintathu elikwi-bing dormer bungalow. * Ifumaneka kule lali ithandwayo, ilungele ukuhamba eScborborough okanye kwiFayiley. Ukufudumeza irhasi embindini we radiators. * Ukuphakama kabini ngokujonga ukukhanya. * Ikhitshi langoku kunye kwigumbi lokutyela. * Kwigumbi lokuhlala / igumbi lokutyela. * Ensuite kwigumbi lokulala eliphambili.
Scarborough in North Yorkshire, Yo11 3tg
Published by Dma Estate Agents
Indawo ye-porch 9'10 "x 8'0" UPVC iphindwe kabini iglasi ekhanyayo enemibala ekhokelwe nge-ceramic tile floor, radiator kunye nesibane sophahla.Hallway 16'4 "x 14'4" Zimbini iikhabhathi ezakhelwe ngaphakathi, ukukhanya kwephahla, isilinganisi sophahla esijikeleziweyo, irediyetha, udonga lokukhanya kodonga.Lounge 18'4 "x 13'10" Nika ilitye lomlilo kunye nokuva ...
Scarborough in North Yorkshire, Yo13 0rx
Indawo evela kwiSikhululo sikaloliwe esibonakalayo, yenyukela eWestborough usiya eFalsgrave, ibhere yasekhohlo kwiSeamer Road eMusham Bank ujikelezo lomhlaba, thatha i-ekhohlo lokuqala kumjikelo olandelayo we-Westway, uqhubeke ungene e-Eastway. Indlela ye-Pindar ikwicala lasekunene. I-UPVC ephindwe kabini emnyango kunye ne-matchin ...
Scarborough in North Yorkshire, Yo11 3lu
Indawo evela kwiSikhululo sikaloliwe esijongene nokuhamba ngesikhephe yenyuka i-Westborough kwi-Falsgrave Road, jika ngasekunene kwiScalby Road, jikela ngasekunene kwiGreen Lane. Le ndawo ikwicala lasekunene. I-Ewardrance umnyango okhokelela kwicala elijonge ngaphambili i-porchsun porch 9'0 "x 7'2"
Scarborough in North Yorkshire, Yo12 6hl
Indawo evela kwiSikhululo sikaloliwe esibonakalayo, yenyukela eWestborough ungene kwiFalsgrave, jika ngasekunene kwiScalby Road. Emva kwendlela ejikeleze iManor ijikela ekunene kwiOsborne Park eqhubeka nokuba yiWoodgate. Le ndawo ikwicala lasekhohlo.Entrance UPVC kabini umnyango ocekeceke kunye neqhwa ...
Scarborough in North Yorkshire, Yo12 5qq
Isikali esibonakalayo sinokubhekisa ku: